ARIMIHII ILHAN OMAR MAXAA CUSUB OO SOO KORDHAY? SOLA INVESTIGATES!
On 8/23/2016 (IST)
Arimihii lagu eeday ILHAN OMAR oo ah gabadhii ugu horeysay oo MUSLIN AFRIKAN ah ee ku guuleysata kursiga aqalka sharciyada gobolka MINNESOTA ayaa waxaa ku soo kordhaya waxyaabo aad u farabadan,ugu horeyn dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay shabakada SOLAPORTAL.COM waxaa wadanka Mareykanka kala soo xiriiray dad isugu jira ajaaniib iyo Somali oo doonaya arimaha ILHAN OMAR iyo shaqsiga la yiri waa walaalked oo la yiraahdo AHMED NUUR ELMI oo iminka ku nool wadanka UK,ugu horeyn sidaan hore u sheegnay ILHAN OMAR gebi ahaan way beeneysay arimaha lagu eeday,iyadoo sheegtay in AHMED NUUR ELMI uu ahaa shaqsi ay is guursadeen isla markaana kala tageen,waxaan u arkaa ayay tiri arimta AHMED ELMI ee la yiri waa walaalkeed FADEEXAYN iyo BEEN ABUUR.
MUHIIM: Fadlan aqri dhamaadka bogga, 23.8.2016 waxyaabo cusub ayaa soo kordhay!
Arimahan waxaa si aad ah u xiiseeynaya warbaahinta dhanka midig ee wadanka USA.iyadoo ay ku adkaatay in gabar Somali,Afrikan iyo Muslim ah ay fadhiisan karto aqalka laga maamulo gobolka Minnesota.
Arimahan waxaa ka dambeeya shaqsi Somali ah oo si aad ah looga yaqaano magaalada Minneapolis oo isticmaalay shaqsiga la yiraahdo ABDI JOHNSON oo goobaha FORUMSKA ah ee Somalida ku wada hadasho aad looga yaqaan..
Shabakada SOLAPORTAL magaca shaqsiga way haysaa,laakiin si aan u maqalno eedan adag,waxaan go'aansanay in dhankiisa iyo waxa jira aan maqalno"ilaa iyo hada EMAILKII aan u dirnay kama soo jawaabin"
Waxaa isla shabakadan baarista ah ee SOLAPORTAL la soo xiriiray wariyaha TOM LYDEN oo u shaqeeya FOX9,wuxuu soo codsaday in aan uga jawaabno dhowr arimood oo shabakadan looga tarjumay,inagoo ku gacan sayrnay oo isla markaa ugu jawaabnay NO COMMENT.
Dhowr saacadood ka dib wuxuu ii soo diray EMAIL kale oo uu soo raaciyay waraaqo DOCUMENTI ah,isagoo leh ka jawaab arimahan si wax walba ay u cadaadaan.
Waraaqaha uu soo diray oo markii dambe uu ku daabacay shabakada FOX9 waxay ku bilaabatay sidan.
Shatiga guurka "marriage licence" waxay dalbadeen Ilhan Oman iyo Ahmed Hirsi sanadkii 2002,laakiin ma isticmaalin,Ilhan Omar waxay si sharci ah u guursatay Ahmed nur Said Elmi oo warbaahinta Mareykanka ay ku tilmaameen in uu yahay walaalkeed sanadkii 2009,laakiin arintaa waxaa gaashaanka ku dhuftay Ilhan Omar oo tiri waa BEEN ABUUR.
Arbacadii la soo dhaafay waxaa shabakada ALPHA NEWS oo wariyaha TOM LYDEN uu aqbaarta ka helay, si qarsoodi ah ula soo xiriiray shaqsi aad looga yaqaano JAALIYADDA SOMALIDA ee Minneapolis,isagoo u sheegay in ay eegaan xafiiska diiwaan gelinta ganacsiga ee Minneapolis,taasoo ay u sheegeen Maqaaxida shaaha ee ONE TO ONE CAFE' LOUNGE.
Ahmed Hersi oo ah aabaha dhalay seddexda caruur ee ILHAN OMAR,ayaa wuxuu diiwaan geliyay ganacsiga kor ku xusan bishii MAAJO 2009,cinwaanka uu ku diiwaan geliyay xiligii uu furayey ONE TO ONE CAFE' LOUNGE waa 859 41st Ave NE in Columbia Heights.
Hadii aan eegno sawirka hoose oo ah SHATIGA GUURKA EE WAYN, oo ay isku guursadeen ILHAN OMAR iyo AHMED NUR SAID ELMI,FEBERAAYO 2009,cinwaanka ganacsiga iyo kan guurka waa isku mid,kaasoo ah 859 41st Ave NE in Columbia Heights,taasoo uu yiri TOM LYDEN waxay xaqiijineysaa in ILHAN OMAR,AHMED NUR SAID ELMI iyo AHMED HERSI ay isku cinwaan ku moolaayeen xiligii ILHAN iyo AHMED ELMI ay is guursanayeem,isagoo raaciyay waa arin aan ka dhici karin SOMALIDA oo dhaqankooda la yaqaan.
Isla shaqsiga soo jaajusay ILHAN OMAR wuxuu wariyaha u sheegay in ILHAN OMAR iyo AHMED HERSI ay marwalba isku qabeen dhanka iyo sharciga ISLAAMKA oo aan marna kala tegin.
Dhanka kale ILHAN OMAR waxay xaqiijisay in iyada iyo ninkeedii hore AHMED NUR SAID ELMI ay kala tageen sanadkii 2011,isla xiligaana ay isku laabteen Mr AHMED HERSI oo ah aabaha dhalay seddexda caruur,qoraalkii ILHAN OMAR hoos ka aqri.
Arintan waxaa xaqiijinaya qoraal ay shabakada MPRNEWS.ORG ka qortay LUULYO 2013,qoraalka iyo sawirka laga diyaariyay wuxuu ahaa MAARSO 2011.
Qoraalka iyo sawirka dusha wuxuu cadeynayaa in AHMED HIRSI iyo ILHAN OMAR ay ahaayeen dad isku qaba DIINTA ISLAAMKA,taasoo cadeyneysa in waxyaabihii ay sheegtay RUN YIHIIN.
Shabakada ALPHANEWS ayaa xaqiijisay in AHMED NUR SAID ELMI guri uu ka deganaa MINNEAPOLIS ay maxkamad si qasab ah kaga saaratay bishii LUULYO 2012,ka dibna wuxuu u wareegay wadanka UK oo dhalasho uu ku leeyahay.
Waxaa kale oo wariyaha uu xaqiijiyay in ILHAN OMAR iyo AHMED NUR SAID ELMI ay wax ka wada barteen jaamacada NORTH DAKOTA EE fargo,LHAN 2009 -2011 AHMEDna 2010-2012. eeg sawirka hoose:
Waxyaabaha kale ee TOM LYDEN uu isoo weydiiyay waxaa ka mid ah,waa maxay sababta uu AHMED NUR SAID ELMI uu u tirtiray barihii uu ku lahaa SOCIAL MEDIYAHA,markii arimahan ay soo baxeen?tusaale ahaan wuxuu ii soo diray TWITTER,, iyo LINKEDIN
Kuwaa oo iminka hawada ka baxay.
Waxyaabaha kale uu xaqiijiyay TOM LYDEN waxaa ka mid ah in AHMED NUR uu yahay shaqsi aad wax u bartay "highly educated" oo aan SOMALIDA UK soo dhexgelin,inta badan wuxuu ku dhex jiraa meelaha FARSHAXANKA "ARTS" lagu qabto,isagoo soo raaciyay sawiro sida uu sheegay aan weli INTERNETKA laga saarin.
ABDIMALIK ASKAR oo la tartamaya dhamaadka sanadkan ILHAN OMAR,isagoo ka socda xisbiga JAMHUURIGA ah ee DONALND TRUMP,wuxuu bartiisa FACEBOOK ku soo qoray,qoraalka hoose:
23.8.2016 Arimaha ILHAN waxaa ku soo kordhay in TOM LYDEN uu ka saaray qoraalkii hore ee uu ku eeday ILHAN,ka dib markii ay soo gaartay watraaq ka timid xeer ilaaliyaha maxkamada Minnesota.
Ugu horeyn aan eegno qoraalkii hore ee TOM LYDEN oo iminka laga saaray shabakada FOX9.
Gebi ahaan way ka saareen shabakada FOX9,eeg sawirka iyo linkigan
Sababta uu ra'yigiisa u bedelay waa waraaqda hoose ee ka timid xeer ilaaliyaha maxkamada Minnesota oo BEENEEYAY arimaha uu soo qoray isla markaana ka hadlay.
Ka dib TOM LYDEN wuxuu soo daabacay qoraalka hoose.
Ugu dambeyn shabakada SOLAPORTAL.COM waxay weli aaminsan tahay qoraalkii ay ILHAN OMAR soo gelisay shabakadeeda,taasoo ay ku xaqiijisay sida ay wax u jiraan,dad badan oo SOMALI ah ayaa ka daba qaatay,kuwaasoo aqbaar fiican aan ka hayno,hadii waqtigii aan u qabanay aysan kaga soo jawaabin,waxaa nagu shardi ah in aan soo bandhigno wixii aqbaar ah ee aan ka helnay wadanka MAREYKANKA.
Waxaa hubaal ah hadii uu alla yiraahdo in ILHAN OMAR ay ku guuleysan doonto doorashada dhici doonta 8da NOVEMBER 2016,tabcan marwalba waxaa jiraya dad ka soo horjeeda,laakiin muhiimada ugu weyn waa in ay shaqadeeda meesha ka sii wado.
Inshallah wixii soo kordha,waxaad kala socon doontaan SOLAPORTAL.COM.